त्यहाँ यति धेरै मानिसहरूको भान्सा संसारलाई कसरी nationalities मा। यस कारण, संसारमा संगठित गर्न सबैभन्दा स्वादिष्ट पकवान लागि प्रतिस्पर्धा, सामान्य मा, यो कुनै अर्थमा बनाउँछ।
पहिले, यो फरक देशका शेफ बीच असामंजस्य छर्न सक्नुहुन्छ, र हाम्रो मुख्य कार्य विपरीत, संघ प्रयास मा छ। दोश्रो, यसो भनेर रूसी राम्रो, जर्मन - छैन धेरै। यो हालतमा मा सर्तहरूको पकाउने हरेक राष्ट्र छ मनपर्ने पकवान, यो छैन उपयुक्त कहिलेकाहीं लागि खपत गरेर अन्य nationalities। तसर्थ, संसारमा सबैभन्दा स्वादिष्ट पकवान, हामी मन मा संसार व्यञ्जन विभिन्न भागमा सबै लोकप्रिय को लामो मेनू सहन पर्छ बारेमा बोल्ने। हामी के यस लेखमा विचार गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
लोकप्रियता को गोप्य
सीएनएन एजेन्सी दुनिया मा शीर्ष सबैभन्दा स्वादिष्ट व्यञ्जन प्रकारको थियो। सूची विभिन्न देशहरूमा र मानिसहरू विशेष गरी लोकप्रिय को परम्परागत भाँडा समावेश र मानिन्छ सबै भन्दा राम्रो: धुनमा, जापानी सुशी, इटालियन पिज्जा, टर्की Kebabs, स्पेनी paella, मेक्सिकन Tacos, आदि पेकिङ संसारको सबैभन्दा स्वादिष्ट व्यञ्जन दर्जा सुझाव देखिन्छ लोकप्रियता को गोप्य आफ्नो ऐतिहासिक मातृभूमि भित्र, र अन्य धेरै देशहरूमा मात्र होइन फैलाउन छ। तर, कहिलेकाहीं, हलुआ मूल नुस्खा अनुसार, तयार गर्न स्थानीय सामाग्री प्रयोग गर्नु पर्छ, यो अर्को क्षेत्रमा उपलब्ध छ। संसारको 50 भन्दा स्वादिष्ट व्यञ्जन र एक स्विस Fondue र युक्रेनी borscht र समावेश पर्मा छम, र ह्यामबर्गर, र आलु चिप्स - सबै सूचीबद्ध छैन। यहाँ तिनीहरूलाई केही लागि व्यञ्जनहरु छन्।
संसारमा जापानी सबैभन्दा स्वादिष्ट पकवान
निस्सन्देह, यो सुशी (रोल, साशिमि)। तिनीहरूले इंसाफ से पूर्वी संस्कृति र दर्शन भाग हो। सुशी - र विज्ञान, र समारोह, बरु लामो। चामल र समुद्री विशिष्ट जडीबुटी र मसाले को वाहेक संग आधारित धेरै जापानी व्यञ्जनहरु। त्यसैले, तयारीको लागि हामीले निम्न सामाग्री आवश्यक:
जापानी सिरका। अब यो सुपरमार्केट मा बेच छ, तर आफ्नै हातले पकाएको गर्न सकिन्छ। यो गर्न, तेस्रो कप स्याउ साइडर सिरका, नुन को एक सानो चम्चा, चिनी दुई ठूलो spoonfuls लिन। राम्ररी सबै मिश्रण। सिरका तयार छ।
वसाबी। यो पेस्ट जापानी सहिजन, सामान्यतया हरियो। यो पनि दोकान मा बेचिएको छ।
सोया सस। , अधिक महंगा र tastier छन् कि ती एक प्राकृतिक किण्वन मसला लिन राम्रो।
गैरी। यो एक सूक्ष्मता कटा मसालेदार अदुवा छ।
Nori। यस पानामा सुकेको र शैवाल भोजन को तयारी को लागि एक विशेष तरिकामा थिचिएको।
जापानी चामल। यो पकवान अनुमति दिन्छ जो अलग पर्दैन ठूलो लस को, रकम समावेश आकार राख्नुहोस्। यो आंकडा सानो र kruglozernisty छ। मूलतः, तपाईं जापानी पाउन भने, ठीक-राउन्ड क्रास्नोडार छ।
ट्राउट। क्लासिक नुस्खा कच्चा माछा लागि भनिएको छ। यो स्वाद accustomed गर्ने छैन मान्छे को लागि, यो नुनीन प्रतिस्थापन गर्न सिफारिस गरिएको छ।
अभोकाडो। तर यो प्रयोग र ककडी (र कहिलेकाहीं एक र अन्य लाग्न) गर्न सकिन्छ।
पनि यो सुशी रोलिङ लागि विशेष बांस चटाई आवश्यक - Makis। यो बिना पकवान एकदम समस्याग्रस्त हुनेछ पकाउन।
कुकिङ सुशी (रोल)
कुक चामल तयार सम्म (पानी दुई कप मा अनाज को दुई कप) फोडा गर्न पूर्ण तरल सुक्खामा। mush यसलाई खोल्दै बिना ठंडा चामल जापानी सिरका Refill। यो सबै एक काठ स्पाटुला संग गर्न सकिन्छ।
अर्को, एक विशेष बांस चटाई nori अप pimples को एक पाना राखे। यसमा - चामल पनि पातलो पत्र। शीर्ष हामी एक सानो वसाबी (यो उत्पादन धेरै तेज छ किनभने, सावधान हुन) राखे। ट्राउट र अभोकाडो (वा ककडी) कट मा पातलो स्लाइस र राख्न मा मध्य को संरचना ताकि गर्न अनुमति दिनुहोस् लागि तह प्रक्रिया। को बांस चटाई संग कस को preform रोल कर्ल। (- धेरै सेन्टिमिटर उच्च) त्यसपछि पातलो धारिलो चक्कु, पानी मा पूर्व-soaking, परिणाम ससेज अंश मा कटौती।
संसारमा इटालियन सबैभन्दा स्वादिष्ट पकवान
Lasagna - इटालियन मेनु को प्रसिद्ध पकवान, विश्वव्यापी लोकप्रियता प्राप्त छ। यसलाई बनाउनको लागि, तपाईं अब पीठो र पास्ता प्रतिनिधित्व छ जो विभाग, कुनै पनि ठूलो सुपरमार्केट मा बेचिन्छ जो, आटा को विशेष पानाहरू किन्न आवश्यक छ।
सामाग्री: 250 ग्राम Lasagne लागि पानाहरू कीमा बनाएको मासु किलो, टमाटर एक पाउन्ड, प्याज को 200 ग्राम, गाजर को 150 ग्राम, धेरै लसुन लौंग, दूध को एक लीटर, 100 ग्राम मक्खन, पीठो 100 ग्राम, पनीर को 300 ग्राम, पनीर को 50 ग्राम " स्वाद parmesan ", वनस्पति तेल, नुन र मरिच।
सूक्ष्मता प्याज र लसुन काट्नु। RUB गाजर coarsely। टमाटर बोक्रा संग र ठूलो RUB (र एक ब्लेंडर मा उपचार गर्न सकिन्छ)। nonstick कोटिंग संग एक कराइ मा (लिन प्राथमिकताको तेल) वनस्पति तेल मा प्याज र लसुन भुट्नु। त्यहाँ पनि - गाजर। यो पनि अलिकति तलना छ। यसबाहेक, मिश्रण परिणामस्वरूप र थप्दा भराई गर्न पैन मा। बारेमा बीस मिनेट भुट्नु। अन्त्यमा हामी टमाटर, चलाउनु थप्न र अर्को पाँच मिनेट simmer। परिणाम एक flavorful भर्ने थियो।
यो सस कुनै पनि आत्म-आदर पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री के छैन संसारमा सबैभन्दा स्वादिष्ट इटालियन पकवान पकाउन जम्मा बिना (फोटो संलग्न)।
एउटा सानो हत्येदार बरतन मा मक्खन ढल्छ। हल्कासित आटा हलचल तलना थप्नुहोस्। गठन गांठ बच्न जगाएर, फिर्ता दूध पोख्नुहोस्। बाक्लो क्रीम को स्थिरता नभएसम्म जगाएर। चटनी जायफल (पाउडर) र तत्संबंधी एक नुन थपेर तयार गर्न सकिन्छ।
तेल greased एक ठूलो पाक पकवान मा, आटा को प्रसार पानाहरू (केही हल्कासित तिनीहरूलाई पूर्व-जोश, तर तिनीहरूले राम्रो रस पकवान को खातामा पकाएको छन्)। कीमा बनाएको मासु protushennogo अग्रिम आधा प्रसार पानामा। को bechamel सस को तेस्रो भाग संग कोट। पनीर ठूलो RUB। छर्कनु आधा। फेरि Lasagne सिट संग कवर। भराई मासु, béchamel, पनीर: र कार्यहरूको अनुक्रम दोहोरिन्छ। आटा को एक पाना संग शीर्ष डिजाइन कवर, बाँकी सस संग कोट, पनीर Parmesan संग छिडकना। कोमल सम्म, चालीस-पाँच मिनेट बारेमा 180 डिग्री मा ओवन मा Bake। Lasagna राम्ररी browned गर्नुपर्छ। यसलाई (इटालियन संस्करण को लागि) बाहिर जान्छ रूपमा, संसारमा सबैभन्दा स्वादिष्ट पकवान, को नुस्खा र फोटो यस लेखमा प्रस्तुत छ। खैर, पकाएको गर्न Lasagna टमाटर सस, धेरै बस तयार छ जो लागू गर्न सक्नुहुन्छ। भद्राक्षको प्याज तेल तला (100 ग्राम) र लसुन (लौंग को एक जोडी)। टमाटर को 300 ग्राम खुली, कट र स्ट्यु पाँच मिनेट लागि प्याज र लसुन संग। अत्तरहरु थप्न - चटनी तयार छ। तिनीहरूले सुगन्धित Lasagna पानी हाले गर्न सकिन्छ।
यो संसारमा सबै भन्दा स्वादिष्ट पकवान फरक कल्पना कुक विभिन्न देशहरूमा भने गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई एक को नुस्खा, मेक्सिकन, कार्यान्वयन मा ढिलाइ बिना दिन।
टाको (एक टाको - पहिलो syllable मा उच्चारण) - ल्याटिन अमेरिका मा एक परम्परागत पकवान (र मेक्सिको विशेष)। यो केक (tortillas) र भर्नको भित्र स्थिति हुन्छन्। सस पनि सेवा छ। कुनै विशेष सीमा भएकोले भरने विविध कल्पित छ। एउटै सबैतिर मूलतः केक पकाउने। tortillas - विश्व मा यो सबै भन्दा स्वादिष्ट पकवान तयार गर्न, तलको जो को नुस्खा दिएको छ, हामी पहिले जग Bake गर्न आवश्यक छ।
सामाग्री: मकैको पिठो, एक सानो नुन चम्चा, बेकिंग सोडा को पिन्च, बेकिंग पाउडर, एक ठूलो चम्चा margarine पकाउने दुई कप। उपयुक्त छ जो, उदाहरणका लागि, यो स्थिरता र पकौडी लागि सामान्य आटा, मा तयार पारे। यसलाई हामी सानो बल गठन। यी केक को लगभग 20 सेन्टिमिटर र दुई बाक्लो मिलिमिटरमा को व्यास गर्छन्। तेल बिना nonstick कोटिंग संग एक पैन तिनीहरूलाई तलना। झाडू प्रत्येक पछि दूर कराइ पीठो संग, अन्यथा यो जल गरिनेछ! कागज तौलिया मा अर्ध-समाप्त पकड। सिद्धान्त तिनीहरूले स्थिर र पछि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो धेरै तहहरू हुन्छन्। सामाग्री हुनुपर्छ सूक्ष्मता कटा वा पारित मार्फत एक मासु Grinder। चिकन लिन (500 ग्राम)। आधा सम्म (तेल को एक न्यूनतम रकम संग) यो तलना। बीउ बिना खुर्सानी खुर्सानी धेरै कोसा सूक्ष्मता कटा। चिकन संग तलना। को भराई पानी पूर्ण वाफ बन्नु पर्छ! अलग, केही प्याज काट्नु र एक कागती को रस संग मिश्रण। अलग - टमाटर (200 ग्राम), सूक्ष्मता कटा। र पनि - grated पनीर (200 ग्राम)। त्यसैले, हामी विभिन्न सामाग्री संग चार कटोरे भयो। अब हामी तयार बनाएको केक लिनुहोस्, र प्लेट तिनीहरूलाई राख्नु (यदि स्थिर - गरम)। प्रत्येक बीचमा आफ्नो स्वाद गर्न toppings विभिन्न प्रकारका आयातित चम्चा। एक पैनकेक मा र्याप र खान्छन्। तपाईं तेज मा डिप सक्नुहुन्छ मेक्सिकन सस। त्यसैले स्वादिष्ट Tacos!
ठीकै संसारको सबैभन्दा स्वादिष्ट व्यञ्जन मा समावेश गर्न सकिँदैन जो अर्को हलुआ, (नुस्खा लागि तल हेर्नुहोस्) - paella। यो भ्यालेन्सिया देखि, अधिक ठीक, स्पेन आउँछ। त्यहाँ paella खाना पकाउने लागि धेरै विकल्प छन्। सबै सामाग्री लागि साधारण: चामल र भगवा (एक मसालेदार पहेंलो प्रत्येक अन्न रंग गर्न)। यसबाहेक, तपाईं एक ठूलो कराइ, भनिन्छ paella आवश्यक छ। बाँकी भएको भू-भाग पकाउने मासु, समुद्री भोजन, घोंघे, पनीर, झींगा आधारमा फरक हुन्छ। पकवान को क्लासिक संस्करण मा खुला आगो तयार छ। सबै घटक एकै समयमा तयार हुनुपर्छ, र चामल crumbly छ। paella विभिन्न प्रकार, स्पेनको शेफ अनुसार - सबैभन्दा संसारमा स्वादिष्ट। केही व्यञ्जनहरु तल दिइएको हो।
सामाग्री: पाउन्ड चिकन, खरायो पाउन्ड, हरियो सेम को 200 ग्राम, सिमी को 200 ग्राम, हरियो खुर्सानी, तीन टमाटर, चामल, भगवा, मसला, तेल को एक पाउन्ड।
Simmer को चिकन र खरायो (diced मा सानो टुक्रा)। सबै तरकारी पनि कराइ मा सास्ती दिइन्छ। त्यहाँ पनि अर्को पाँच मिनेट simmer, कटा टमाटर खुली थप्नुहोस्। त्यसपछि सबै उम्लिरहेको पानी (दुई लिटर) संग भर्नुहोस्। मासु पूर्ण तयारी (यो प्रक्रियाको बारेमा चालीस मिनेट लाग्नेछ) सम्म simmer जारी। चावल, केसर र मसाले थप्नुहोस्। कम गर्मी मा बारेमा बीस मिनेट को लागि खाना पकाउन।
समुद्री संग Paella नै योजना बारे तयार भइरहेको। मासु विकल्प झिंगा, mussels, घोंघे, स्क्विड। , छोटो समयमा तयार तिनीहरू एक लामो समय को लागि समुद्री उपचार गर्न सिफारिस गरिएको छैन किनभने मात्र प्रारम्भिक चरण। बाँकी, सामान्य रूपमा, एक crumbly ठूलो, खुशबूदार र सुगन्धित प्राप्त गर्नुपर्छ।
यो केवल केही व्यञ्जनहरु छ, तर तिनीहरू अझै पनि प्रशस्त मात्रामा अवस्थित। यो प्रयास र तपाईंले संसारको सबैभन्दा स्वादिष्ट व्यञ्जन पकाउन, जो को फोटो लेख मा प्रस्तुत छ।
पनीर "लैम्बर्ट": संरचना, निर्माता र अन्य रहस्य
गहुँ आटा अतिरिक्त क्लास। उत्पादन विवरण
ससेज horsemeat देखि गरे। Kazy - कजाख घोडा मासु ससेज (नुस्खा)
Multivarka मा कीमा बनाएको मासु संग आलु casserole - बच्चाहरु को मनपर्ने पकवान!
आधुनिक छत सामाग्री stekloizol: बिछाउने
कान मा एक्यूपंक्चर अंक। वजन लागि कान मा अंक
फूल बैंगनी - परी कथा एक तत्व
प्रकृति मा खाद्य श्रृंखला
प्रोस्टेट मा फर्सी बीउ। prostatitis कद्दू बीउ को उपचार को लागि समीक्षा